पीडितहरूकाे सहयाेगका लागि हामी लाग्नै पर्छ- वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढामगर – रोल्पा समाचार
२०७७ भाद्र २१, आईतवार ०८:४४ गते
पीडितहरूकाे सहयाेगका लागि हामी लाग्नै पर्छ- वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढामगर
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ भाद्र २१, आईतवार ०८:४४ गते
वर्षात सुरुवातसँगै देशको विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोबाट हजारौं संख्यामा नागरिहकहरु प्रभावित बनेका छन् । यो पीडाबाट रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका–५ नंंं. वडाको विभिन्न टोलका धेरै नागरिकहरुले पनि छुट पाउन सकेनन् । यस वडाको विभिन्न टोलका नागरिकहरु आवासबिहीन बनेको छन् । पहिरोले आवास र बारीमा क्षति पु¥याउँदा आफन्तको साहारामा दैनिकी जीवन बिताउन बाध्य छन् भने केही टोलका नागरिकहरु पनि पहिरोको उच्च जोखिमा रहेका छन् । पहिरो पीडितहरुलाई दैनिक जीवन यापनमा सहजता बनाउने उद्वेश्य सहित वडा कार्यालयको सक्रियतामा सहयोग कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । वडा अध्यक्ष भरत बहादुर बुढामगरसँग वडाको विभिन्न टोलमा पहिरोको अवस्था, राहत वितरण, राहत संकलन सहित अन्य विषयवस्तुमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
 पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ ।
धन्यवाद छ ।
 कुन कार्यमा व्यवस्त हुनुहुन्छ ?
आजभोली वर्षात मौसम छ । बाढीपहिरोको जोखिम रहेको र पहिरोबाट प्रभावित पीडितहरुको राहत संकलन कार्यमा व्यस्त सँगसँगै वडा स्तरीय विनियोजिट रकमको उपभोक्ता समिति गठन लगायका कार्यमा व्यस्त छु ।
 यस वडाको भौगोलिक बनावट कस्तो छ ?
निकै अप्ठ्यारो छ । पहाडी भू–भाग भएकाले भिर, पहरा र खोचहरु छन् । माडी गाउँपालिकाको विकट वडा जस्ताको भएको छ । माडी खोलाले पुरै वडालाई छेकेको कारण झण्डै छ महिनासम्म सवारी साधनको आवागमन हुँदैन । निकै कठीन छ । साविकको भाबाङ गाउँ विकास समितिलाई राज्य पुर्न संरचनाको क्रममा एउटा वडा बनाएकोले माडी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाले पनि ठूलो र जनासंख्या पनि धेरै रहेको छ ।
 हालसम्म कति घरपरिवार पहिरोले घरबारी बिहीन बनाएको छ ?
हालसम्म यस वडाको विभिन्न टोलमा १४ घरपविारको घर पहिरोले पुरेको छ ।
 पहिरोबाट कति धनजन क्षति पु¥याएको छ ?
ठ्याककै एकिन त छैन । तर, झण्डै रु २ करोड बराबरको धन सम्पत्तिमा पहिरोले क्षति पु¥याएको अनुमान छ । पहिरोको पूर्व अनुमानले समयमा नै सतर्क रहँदा पनि छ जना वडाबासीहरु घाइते हुनुभएको छ । तर, पहिरोबाट बासीहरुले ज्याउन गुमाउनु परेन् ।
 यस वडाको विभिन्न टोलमा थप पहिरोको अवस्था के छ ?
अझै पनि वर्षात भइरहेको हुँदा करीव २ दर्जन घरहरु पहिरोको जोखिममा छन् ।
 पहिरो प्रभावित परिवारहरुको बसाई व्यवस्थापन कुन–कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ ?
आफ्नै टोल वरिपरी सुरक्षित घरमा बसाई व्यवस्थापन गरेका छौं ।
 पहिरोबाट वडाबासीहरुलाई बचाउनको निम्ति कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस वडाको विभिन्न टोलमा पहिरोको उच्च जोखिम भए पनि समयमा नै सतर्क रहन सचेत बनाउँदै आएका छौं । जे होस् वडाबासीहरुलाई पहिरोबाट बचाउनको निम्ति सचेत बनाउँदै छौं ।
 पहिरो पीडितलाई राहत वितरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कतिपय घरहरु कुनै पनि सामानहरु, बन्दोबस्तिहरु निकाल्न नपाउँदै पहिरोले बगाएको छ । कतिपय घरपरिवारहरुले पूर्व सतर्क रही आफ्ना सामानहरु सुरक्षित ठाउँतिर व्यवस्थापन गरेकोले तत्काल लत्ताकपडा नै नहुने परिवारलाई विभिन्न बन्दाबस्तिहरुका सामानहरु सहित खाद्यन्न उपलब्ध गराएका छौं ।
 पहिरो प्रभावत परिवारहरुलाई हालसम्म कुन–कुन निकायबाट राहत उपलब्ध भएको छ ?
खास गरेर माडी गाउँपालिका, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उप शाखा घर्तिगाउँ, युवा क्लवहरु र स्थानीयबासीहरुबाट राहत उपलब्ध भएको छ । अन्य विभिन्न सहयोगी मनकारी मनहरुबाट त पहिरो पीडितको लागि राहत हामीलाई उपलब्ध हुने क्रम जारी छ ।
 राहत संकलनका लागि वडा कार्यालयबाट भएका प्रयासहरु बताइदिनुहोस् ?
जब यही महिनाको ४ गते रातिको पहिरोबाट यस वडाको विभिन्न टोलका १२ ओटा घरहरु भत्किादा हामी भाबाङबासी र वडाको जनप्रतिनिधि निकै चिन्तामा परेका छौं । ६ गते वडा समितिको बैठकबाट आर्थिक सहयोगको अपिल निकालेका थियौं । प्रहरीको मुचल्कालाई वडा कार्यालयको सिफारिस सहित सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरेका छौं । व्यक्तिगत दृष्टिकोणले पनि देश तथा विदेशमा रहनु भएका दाजुभाइ, दिदी बिहनीहरुलाई अनुरोध समेत गरेका छौं । अहिले सहयोगी मनकारी मनहरुको सहयोगबाट राहत संकलन भइरहेको छ । वडा कार्यालयको पहलमा एउटा दैविक प्रकोप राहत संकलन समिति गठन गरेका छौं । यस समितिले वडाभरि सहयोग रसिद वितरण गरिरहेको छ ।
 पहिरो पीडितबिहीन परिवारहरुको निम्ति कुन–कुन निकायसँग समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
संघीय संसद, प्रदेश संसद, माडी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पालाई सहयोगका लागि वडा कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
 हालसम्म कुन–कुन निकायबाट कति राहत संकलन गर्नुभएको छ ?
हालसम्म विभिन्न ठाउँमा राहत संकलन भइरहेको छ । एकिन त छैन । तर, हाम्रो सम्पर्कमा भएको रकम करीव रु ६ लाख संकलन भएको छ । प्रवासतिर एकीकृत प्रवासी मञ्च भाबाङले राहत रकम संकलनमा अमेरिकाबाट भाबाङ निबासी ओम बुढामगरको पहलमा राहत रकम रु २ लाख ४ हजार ६१० र रोल्पाली युवा नेतृत्व नविन खड्काको पहलमा रु १ लाख हामीलाई प्राप्त भएको छ । अन्तराष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजले पनि राहत संकलन गर्दै गरेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ । साथै व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न ठाउँमा राहत संकलन कार्य जारी छ ।
 पहिरो पीडितहरुमाध्ये कति घर परिवारका आवास पुर्ननिर्माण सम्भव छ भने कति परिवारको निम्ति बसाई स्थान्तरण गर्नुपर्ने छ ?
हालसम्म यस वडाको विभिन्न टोल गरी १४ घरपरिवारलाई स्थान्तरण गर्नुपर्ने र घर जटि पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 पहिरो पीडितको आवास निर्माणको निम्ति कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?
यो विषय अझै छलफलको रहेको छ । जे होस् यस विषयमा बहस थालनी भइसकेको छ ।
 पहिरोको दुःखत अवस्थामा मनकारी मनहरुबाट प्राप्त सहयोगको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
निकै खुसी लाग्छ । स्वतस्फू ढंगले हामीलाई सहयोग गरी राख्नु भएको छ । सायद हाम्रो पीडालाई उहाँहरुले आफ्नै समस्या जस्तो थान्नुभयो होला ।
 वर्षातको मौसममा विभिन्न महामारी रोगको संक्रमितको उच्च जोखिम भएको हँुदा पहिरो पीडितहरुको बसाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
सबैतिर जोजिख उस्तै छ । समस्या सबैतिर छ । प्रत्येक दिन जसो वर्षातको भएको खबर आइरहन्छ । तर, पहिरो पीडितहरुको दुःख सुख व्यवस्थापन भएको छ ।
मनकारी मनहरुले आर्थिक सहयोगका लागि कुन–कुन माध्यममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले आधिकारिक दृष्टिकोणले वडा सदस्य सविना घर्तीमगरको अध्यक्षतामा ९ सदस्य दैविक प्रकोप राहत संकलन समिति गठन गरेका छौं । यस समितिको खाता नम्बर १६५००६८८२०७३०००००१ सञ्चालन भएको छ । यस खातामा राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । र साझै हामीसँग सम्पर्क गर्दा सहजै हुन्छ ।
 अव्यवस्थित सडक विस्तार नै पहिरोको प्रमुख स्रोत हो ?
यस वडाको हकमा सडकलेभन्दा पनि अविरल वर्षातले निमत्याएको विपद् हो भने पहिरो गएको केही ठाउँमा सडकको असर छैन ।
 सरोकारवाला निकायहरु र वाडाबासीहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । दुःख पर्दा नै सबैको सहयोगको खाचो पर्ने हो । त्यसैले दुःख घडीमा हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण सहयोग मनकारीहरुमा विशेष सम्मान र आभार व्यक्त गर्दछु । र विपत्तिसँग जुड्न सम्पूर्ण वडाबासीहरुलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्न पनि अपिल गर्दछु । साथै अझै सबैतिरबाट सहयोग अपेक्षा रख्दछु ।
 अन्तिममा केही कुरा छुटेका छन्, कि ?
सम सामयीक विषयमा विशेष माडी गाउँपालिका–५ नं. भाबाङको पछिल्लो पहिरोको विपत्ति सम्बन्धि आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका परिवारप्रति धेरै–धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
प्रोग्रेसिभ इन्जिनिरिङ एशोसियन नेपालको टदर्थ जिल्ला कार्य समिति गठन
१७ जना श्रमिक बालबालिकाहरुलाई खाद्यन्न वितरण
रोल्पाको थबाङमा पहिरोले पुरिएर २ को मृत्यु ४ जना बेपत्ता
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ भाद्र २७, शुक्रबार ०३:४४ गते
मानसिंह विश्वकर्मा भाद्र २७ रोल्पा रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका वडा नं. २ (साविक थबाङ गा.वि.स ७) छेर्लोबाङमा पहिरो पुरिएर २ जनाको मृत्यु...
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाको चौथो जिल्ला सम्मेलनबाट मिलन डाँगीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ माघ १५, बिहीबार १६:०२ गते
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाको चौथो जिल्ला सम्मेलनबाट मिलन डाँगीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समितिमाघ १५ गतेलिबाङ–रोल्पा ‘मेहनत सृजना उत्पादन...
थबाङ गाउँपालिकाको प्रेस संयोजक जिनाबाङका डाँगी नियुक्त गरेपछि
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७६ श्रावण १३, सोमबार १५:५४ गते २०७६ श्रावण १४, मंगलवार १४:२४ गते
रोल्पा समाचारदाता लिबाङ रोल्पा २०७६ साउन १३ थबाङ गाउँपालिकाले गंगादेव गाउँपालिका जिनाबाङका विमलराज डाँगीलाई प्रेस संयोजक नियुक्ति गरेको छ । साउन...
त्रिवेणी ७ रानागाउँ र नाङामा १० लाखमा ५किलोमिटर मोटरबाटो निर्माणले स्थानीयबासीहरु खुशी
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ कार्तिक २४, सोमबार ०३:५१ गते
रोल्पा समाचारदातागैरीगाउँ रोल्पाकात्तिक २३ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा न ७ रानागाउँ र नाङामा मोटरबाटो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।...
प्रदेश नं. ५ फिचर विचार
व्याज अनुदानकाे सिफारिसका लागि विभेद गरिएकाे छैन- उद्याेग अधिकृत तिलकराम वली
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ फाल्गुन १७, सोमबार १२:२७ गते २०७७ फाल्गुन १७, सोमबार १२:२८ गते
व्याज अनुदानकाे सिफारिसका लागि विभेद गरिएकाे छैन- उद्याेग अधिकृत तिलकराम वली उद्यमी विकासमा विगतदेखि नै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रोल्पा...
भलिबल खेलबाट नै नेपाललाई विश्वमा चिनाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतम प्रसाद लासिवाले
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ पुष २७, सोमबार १६:०४ गते
रोल्पा समाचारदातापुष २७ लिबाङ रोल्पा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतम प्रसाद लासिवालेनेपाल भलिबलसंघ केन्द्रीय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतम प्रसाद लासिवाले नेपाल सरकारले...